चार पार्टीबाट मन्त्री : सात पटक भौतिक योजना मन्त्री बनेका गच्छदारको १२औँ सत्तारोहण -
राजनीति | Tuesday, 9th May 2017, 01:47 PM |
काठमाडौं – नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन् । योसहित उनी १२आैँ पटक मन्त्रिपरिषद्मा पुगेका छन् । लोकतान्त्रिक फोरमलाई गच्छदारसहित ३ मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार सरकारमा सहभागी गराएका हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उनलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी छिन् । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
दर्जन पटक मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका गच्छदारले मन्त्री बन्ने निश्चित भएपछि सर्वप्रथम रोज्ने निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय हो । उनले अहिलेसम्म ६ पटक यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, तथ्याङ्क हेर्दा मन्त्रालयको नाम भने पटक–पटक फेरिएको छ । उनी पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ०५२ मा मन्त्री बन्दा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय रोजे । त्यसपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा पनि उनलाई त्यही मन्त्रालय दिइयो । थापा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पनि गच्छदारले सो मन्त्रालय छाडेनन् ।
गच्छदार अहिलेसम्म चार पार्टीका नामबाट मन्त्री बनेका छन् । उनी २०५९ सालसम्म नेपाली कांग्रेसका नेताका रुपमा मन्त्री बने । २०६५ मा तत्कालिन एमाओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा मधेसी जनअधिकार फोरमका तर्फबाट मन्त्री बने । २१ वैशाख ०६६ मा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि ११ जेठ ०६६ मा एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपाललाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा फोरमभित्र विवाद भयो । त्यही विवादका कारण गच्छदारले पार्टी फोडेर मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) गठन गरी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा भौतिक योजना र निर्माण मन्त्री बने । त्यही पार्टीबाट डा. भट्टराई र ओली नेतृत्वमा पनि मन्त्री बने । अहिले नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको नामबाट मन्त्री बनेका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा लोकतान्त्रिक फोरमले तीन मन्त्रालय पाएको छ । सो पार्टीका महामन्त्री मिनराज थारुका अनुसार गच्छदारले संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, जितेन्द्रनारायण देवले सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र डा. गोपाल दहितले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । उनीहरु सबैले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएर सोमबार नै मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन् । देव लोकतान्त्रिक फोरमका केन्द्रिय सदस्य हुन भने दहित बरिष्ठ नेता हुन । दहितले केहि समय अघि मात्रै गच्छदार नेतृत्वको पार्टीसंग आफु अध्यक्ष रहेको थरुहट तराई पार्टी नेपाल एकिकरण गरेका थिए । उनलाई पहिलो वरियताको उपप्रधानमन्त्री दिइएको सो पार्टीका महामन्त्री रामजनम चौधरीले जानकारी दिए ।
गच्छदार आजै सरकारको नेतृत्वमा जाने तयारी, उपप्रधानसहित स्थानीय बिकास मन्त्रालय सम्हाल्ने
काठमाडौँ । विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आजै सहभागी हुने...